Aartiiste Jarmal ah oo ka lacageystay Sawir uu ka sameeyay Laacib Franck Bilal Ribery (Warbixin Tarjuman+Sawir ) « AYAAMO TV
Aartiiste Jarmal ah oo ka lacageystay Sawir uu ka sameeyay Laacib Franck Bilal Ribery (Warbixin Tarjuman+Sawir )
724 Views Date March 15th, 2014 time 7:21 am
Sawirka laacib Franky Ribery oo gudaha Jarmalka la kala siisanayo 76.000 oo Euro. Ninka Ribery sawirka dahabiga ah ka sameeyay waxaa lagu magacaabaa Helmut Lutter wuxuuna u dhashay gobolka Bayer ee dalka Germany.
Iibsiga sawirkaan ayaa durbadiiba waxaa bilaabay dadka lacagta leh ee taageera kooxda Fc Bayern München kuwaas oo ku dhagsanaya ama hor dhigaya goobahooda gacsiga iyo shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay.
Aartiistaha sawirkaan sameeyay ninka lagu magacaabo Helmut Lutter ayaa waxa uu sameeyay caqli ka dib markii uu u yeeray laacib Franck Bilal Ribery si uu ugu gadmo sawirka dahabiga ah ee uu ka sameeyay xiddigaas . Ciyaaryahan Franck Ribery waa xiddiga loogu jecel yahay kooxda Fc Bayern München marka uu ka maqan yahayna naadiga Bayer Munich waxaa laga dareemaa culeys.